Sekoly azo antoka- Ny votoatin'ny lalam-pianarana any amin'ny sekolim-panjakana - FOI Request. | HAMPITOERANA
Sekoly azo antoka- Ny votoatin'ny lalam-pianarana any amin'ny sekolim-panjakana - FOI Request.
Tamin'ny Oktobra 2018 CAUSE (Coalition Against Unsafe Sexual Education) dia nandefa fangatahana Fahafahana momba ny Fahalalahana ary nahazo valiny avy amin'ny Coalsition an'ny sekoly azo antoka momba ny fandaharan'asan'ny fandaharam-pianarana azo antoka izay natao any amin'ny sekoly Victoria, Australia.
CAUSE, tamin'ny alàlan'ny mpisolovava Sharrock Pitman Legal, dia nandefa ny atiny ny taratasy etsy ambany tao amin'ny tranokalan'ny Safe Schools Coalition ary nahazo mailaka niaraka tamin'ny valin-tenin'ny valintenin'ny mpamaky. (SOA AZY HITANAO IZAO fa ny URL voalohany TSY METY HITOMPOANA NO HAMPIASA AZY.)
Ny fahalalahana amin'ny fangatahana fangatahana amin'ny Coalition Sekoly azo antoka.
Raha te hamaky ny fangatahana fahafahana momba ny fahalalahana momba ny fahalalahana amin'ny teninao ianao dia iangavio ny pdf. Afaka mampiasa mpandika pdf an-tserasera ianao handikana ny pdf amin'ny fiteninao. Ny mpandika teny dia afaka miditra eto: - https://www.onlinedoctranslator.com/
Ny fahalalahana fampahalalana mamaly amin'ny fangatahana ireo fitaovana ilaina amin'ny sekoly. DET FOI 2018-329
Misaotra anao tamin'ny valin-teninao farany teo.
Izahay manaiky fa mangataka ny 7 ny fangatahan'ny FOI ny fangatahanao, hanova izany ho:
7 Ireo loharanom-pahalalana natokana ho an'ny mpampianatra ao ambanin'ny fandaharam-pianarana HPE, ny fahasalamana ara-pananahana, ny famoretana sy ny fanabeazana momba ny firaisana ara-nofo. Tafiditra ao anatin'izany ny vondrona natolotry ny antoko fahatelo natokana sy tsy tafiditra ao anatiny, Minus18, Project Rockit, "Beyond That Gay" - Daniel Witthaus, Ansell rehetra Sex-Ed. Kitapo mifandraika amin'ny Oniversite La Trobe.
Raha ny momba ny ampahany voalohany amin'ity fangatahana ity ('Ireo loharanom-pahalalana azo ampiharina rehetra eo ambany fandaharam-pianarana HPE, fahasalamana ara-pananahana, herisetra ary fanabeazana momba ny firaisana ara-nofo '), azafady, azafady fa azon'ny besinimaro azafady ny antontan-taratasy.
Ny fifandraisana mifandraika mifandraika amin'ity ampahany amin'ny fangatahana ity dia ireto manaraka ireto ((ATSORO IZAO fa TSY HISY AZONY NY LALANA Voalohany.)
https://www.education.vic.gov.au/school/teachers/health/mentalhealth/Pages/buildingresilience.aspx (eo ambanin'ny tabilao 'Ampianaro' ny loharano)
Ankoatr'izay, ny Departemantan'ny Fanabeazana sy ny Fiofanana (ny Departemanta) dia manome soso-kevitra amin'ny sekoly sasany ny loharanom-pahalalana "All of us" izay tsy hita ao amin'ny tranokala FUSE na tranokalan'ny Departemantan'ny departemanta. Hita ao amin'ity tranokala ity eo ambanin'ny tabilao "Sekoly azo antoka". na > kitiho eto <
Azafady mba lazao fa tsy misy ny baiko omena anao. Safidy ho an'ny sekoly hampiasaina izy ireo, ary ny mpampianatra dia mampihatra ny fomba fanabeazana arak'asa amin'ny fisafidianana sy fampiasana ireo fitaovana mifanaraka amin'ny toe-pianarana sy ny vondron'izy ireo mpianatra.
Raha ny momba ny tapany faharoa 7 ny fangatahanao ('ny soso-kevitry ny antoko fahatelo manolotra ary tafiditra ao anatin'izany, saingy tsy voafetra ihany, Minus18, Project Rockit, "Beyond That Gay" - Daniel Witthaus, Ansell rehetra Sex-Ed. Kitapo mifandray amin'ny Oniversite La Trobe '), miangavy anao, miangavy anao fa mila mifandray mivantana amin'ireo fikambanana ireo ianao raha mila loharanom-baovao mifandraika amin'ireny fikambanana ireny.
Maniry ihany koa izahay hanome torohevitra anao momba ireo teboka enina voalohany tamin'ny fangatahana anao, dia:
1 Ireo fitaovana rehetra mifandraika amin'ny fandaharam-pianarana 'Sekoly azo antoka' izay napetraky ny Departemantan'ny fampianarana sy ny fampiofanana ho an'ny taona isan-taona ao amin'ny Sekolin'ny Kilonga, na eo amin'ny fandaharam-pianarana 'Sekoly azo antoka' na amin'ny sehatra hafa amin'ny fandaharam-pianarana.
2 Ireo fitaovana rehetra mifandraika amin'ny fandaharam-pianarana 'Sekoly azo antoka' izay navoakan'ny Departemantan'ny fampianarana sy ny fampiofanana ho an'ny taona isan-taona ao amin'ny Sekoly Faharoa, na eo amin'ny fandaharam-pianarana 'Sekoly azo antoka' na amin'ny sehatra hafa amin'ny fandaharam-pianarana.
3 Ireo fitaovana sy torolàlana fampianaran-kevitra mifandraika amin'ny fandaharam-potoana 'Safe School' izay nomena ho an'ny mpampianatra manerana ny Sekoly Kilonga sy Sekoly Faharoa. Ity fitaovam-pampianarana ity dia misy ny fitaovana fitantanana sy noforonina avy amin'ny departemantan'ny fampianarana sy ny fampiofanana ary / na ny antoko fahatelo.
4 Izay boky misy ny mpianatra izay noforonina, namoaka, nizara ary nampiasaina nifandraisany tamin'ny fandaharam-potoana 'Safe sekoly' manerana ny Sekoly Kilonga sy Sekoly Faharoa.
5 Izay rohy amin'ny Internet na fika fidirana an-tsehatra izay omena ny mpampianatra sy / na mpianatra hirotsaka an-tsehatra amin'ny alàlan'ny fandaharam-potoana momba ny 'Safe School', na ny departemantan'ny fampianarana sy ny fampiofanana na ny antoko fahatelo, manerana ny sekoly ambaratonga voalohany sy ny sekta. .
6 Ny porofo rehetra, na ny toetra sy ny habetsaky ny natiora, izay fananan'ny Departemantan'ny fampianarana sy ny fampiofanana, izay mampiseho famaritana (na tsara na ratsy) eo anelanelan'ny programa 'Safe School' sy ny valim-pianarana mpianatra. Anisan'izany ny porofo azo raisina ao amin'ireo Sekoly Kilonga sy Sekoly Faharoa.
Ny VOI FOI dia nahatonga ny fisavana hatao mba hamantarana ireo antontan-taratasy amin'ny faritany misy ifandraisany. Hitanay fa tsy misy antontan-taratasy mifandraika amin'ny fepetra tsirairay amin'ireo enina enina notakinao ireo.
Raha tsy misy antontan-taratasy misy ho an'ny teboka 1 mankany 6, ary raha misy antontan-taratasy am-pahibemaso ho an'ny teboka 7, dia vita ny fametrahana ny fangatahana FOI.
Sampam-pahalalahan'ny fahalalahana fampahalalam-baovao
Departemantan'ny Fampianarana sy ny Fampiofanana
Toerana fandatsaham-bola 2, East Melbourne VIC 3002